အာရှတလွှား | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 147
၂၀၁၂၊ ရတနာဂီရိနှင့် ရေကန်သာ ကြာတိုင်းအေး နှစ်သစ်သို့….
ဖိုးထက် ဒီဇင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာကြရင်ဖြင့် အမှတ်တရ နေ့တွေ၊ လွမ်းမော တိမ်းမူးဖွယ် နေ့တွေ၊ တန်ဖိုးထားစရာ ရက်စွဲတွေ ရှိကြမည်။ မွေးနေ့၊ ချစ်သူသက်တမ်း ဘယ်နှစ် နှစ်ပြည့်၊ လက်ထပ်မင်္ဂလာ ဘယ်နှစ် နှစ်မြောက် စသည် စသည်ဖြင့် Personal ဆန်သော နေ့စွဲများမှသည် လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ အာဇာနည်နေ့၊ အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့၊ အစ်နေ့၊ ခရစ်စမတ် စသည့် အများနှင့် ဆိုင်သော ရက်စွဲများရှိကြသည်။ နှစ်တစ်နှစ်၏ ပြက္ခဒိန်ရက်စွဲပေါ်တွင် အမှတ်ရစာနေ့စွဲများ၊ သတိထားမိစရာ ရက်စွဲများ အမြဲလိုလို ရှိနေတတ်သည်။ ထို ၃၆၅ ရက်သော ရက်စွဲများကြားမှ ကျွန်တော့်အတွက် မသိလိုက် မသိဘာသာ ဖြတ်ကျော်လို့ မရသော ရက်စွဲနှစ်ခုသာ ပြက်ပြက်ထင် ထင်ရှိသည်။...
ကာတွန်းအိုကေလင်း – ပြည်သူတွေက ဆင်းရဲပြီး၊ တိုင်းပြည်က ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ ဒီလိုပါ … ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ချွေးစက် … လက်ဆောင် ကမာပုလဲ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ဘ၀ ယဇ်ပလ္လင်ထက်မှာ ကြိတ်ပြီးကျခဲ့ရတဲ့ မျက်ရည်စများ …။ ကျောက်စိမ်းစားပွဲပေါ်က ရွှေပန်းကန်ထက် တစက်စက်နဲ့ ကြေကွဲမျက်ရည် …။ သနားတယ်မောင် အဲဒီမျက်ရည် … အပြစ်မဲ့သွေးတို့ စွန်းထင်းတယ်။ နေပူစပ်ခါး … စက်ရုံအလုပ်ရုံရနံ့ ပါးကွက်ကြားပေါ် ဖြတ်စီးလာတဲ့မြစ်များ ခင့်နဖူးပေါ်မှ မြစ်ဖျားခံခဲ့တဲ့ အလွမ်းတွေ … လေညင်းကနေ … ပို့လိုက်တယ်။ ။ ၅၊ ၁၂၊ ၂၀၁၂ (Illustration credit to http://www.myspace.com/marylestlost/blog ) No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 147 of 156«1...145146147148149...156»
မလေးမူးယစ်အမှု ထိပ်တန်း သံသယတရားခံဟာ လူကုန်ကူးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်လို့လည်း စွပ်စွဲခံနေရ https://t.co/3aSHBh7MyX https://t.co/m1DkyhM81Q about4hours ago ReplyRetweetFavorite
စမ်းစမ်းတင် – တွံတေး၊ ဆူးအက်နဲ့ ကရာတူးမြောင်း တွေက ပေးတဲ့အတွေး https://t.co/dBnuR0prEC https://t.co/3sEpvg6dnc about7hours ago ReplyRetweetFavorite
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် လူငယ်များရဲ့အခန်းကဏ္ဍ ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးပွဲ ဇွန်၂၄ https://t.co/cuI3AIqEap https://t.co/qtTi71gf3S about 11 hours ago ReplyRetweetFavorite
လင်းသက်ငြိမ် ● ဝမ်းနည်းစရာ သတင်းစကား https://t.co/vggaxW3Fhr https://t.co/sJxYEJfjdm about 21 hours ago ReplyRetweetFavorite